VaTsvangirai Vanoti Vatungamiri Vatsva muAfrica Ngavave neGwara Rakajeka
Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Local time: 06:34
WASHINGTON— Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri webato guru reMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanoti mhirizhonga inoitika pakati pevanhu vatema pachavo munyaya dzezvematongerwo enyika, chinhu chinofanirwa kupera zvachose muAfrica.
Vachitaura semunyarikani mukuru pamusangano webato reOrange Democratic Movement, ODM, kuKenya, VaTsvangirai vati zvinhu zvakakosha kuti vatungamiri vatsva vemuAfrica vaone kuti mhirizhonga muvanhu yapera zvachose. VaTsvangirai vatiwo vatungamiri vanenge vasarudzwa vanofanirwa kuva negwara rakajeka rinoita kuti nyika dzavo, pamwe neAfrica yose dzive neremangwana rakanaka.
VaTsvangirai vashora zvikuru katsika kezvematongerwo enyika kanodzosera vatungamiri vanenge vakundwa musarudzo mumasimba ekutonga nenzira isingafadze veruzhinji.
VaTsvangirai vakakunda mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, musarudzo dzakaitwa muna 2008, asi pakazoitwa kutaurirana kwakazoona VaMugabe vachipihwa masimba ekutonga muhurumende yemubatanidzwa.
Kenya yakaitawo sarudzo dzakasiya vanhu vakawanda vafa muna 2007 musarudzo inofungidzirwa kuti yakanga yasarudza VaRaila Odinga vebato reODM. Asi pakazotauriranwa VaOdinga vakazoitwa mutungamiri wehurumende, ukuwo VaMwai Kibaki, vakaramba vari mutungamiri wenyika iyi.
VaTsvangirai vakasvika muNairobi neChina mushure mekukokwa nasahwira wavo, uye vari nemutungamiri webato ODM, VaRaila Odinga, avo vakange vari munyarikaniwo mukuru pakongiresi yeMDC-T muBulawayo gore rapera.
VaOdinga, avo vanova zvakare mutungamiri wehurumende yeKenya, vakadomwa nebato ravo kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri weKenya.
Mashoko aVaTsvangirai Vachitaura muNairobi kuKenya